Ukumakethwa Kwemidlalo Yeselula shazi, Izifundo Ezinhle Kakhulu ezivela ku-Opharetha | Martech Zone
Iminyaka eyishumi futhi ama-Smartphones asebenze kahle futhi ngokweqiniso. Idatha ikhombisa lokho ngo-2018, kuzoba nabasebenzisi be-smartphone abayi-2.53 billion emhlabeni jikelele. Umsebenzisi ojwayelekile inezinhlelo zokusebenza ezingama-27 kudivayisi yazo.
Ngabe amabhizinisi awusika kanjani umsindo lapho kunokuncintisana okungaka? Impendulo ilele endleleni eholwa idatha ekumakethweni kohlelo lokusebenza nokuqonda okufundwa kubathengisi beselula abayibulalayo emkhakheni wabo.
Umkhakha wezokudlala, manje oyimakethe yeselula ekhulayo uqopha impumelelo emangalisayo. Ngenxa yentuthuko ekuhlanganisweni nasekuthuthukisweni kokuxhumeka kweselula, ukuhlaziywa kwedatha, i-UX nokumaketha kwamaselula, imali engenayo yokudlala emhlabeni ifike ku- $ 91 billion ekupheleni kuka-2016. Abasebenza ngamageyimu bayazi ukuthi ukutholwa kubalulekile, kepha amabhajethi wokumaketha asetshenziswa kangcono emikhankasweni yokugcinwa kuselula. Banikela ngokungaphezulu ngemali yakho. Umbiko wethu we-Mobile iGaming Insights ubeka amanye amaqhinga asemqoka wokuqinisa ukugcinwa kuselula.
Landa ikhophi lakho lapha
Izinkampani zamageyimu zigxila kumamodeli athile wokutholwa kwamaselula, ohambweni lwamakhasimende olunamandla, okubangela kususelwa ekusebenzeni komdlali nasekuzenzakaleni kwezinqubo ezithintekayo. Abasebenza ngokubheja nabadlali bezemidlalo bazi kakhulu ukusebenzisa iziteshi ezihamba phambili zabadlali babo ezikhathini zabo ezamukelekayo kakhulu. Kusuka ngaphakathi nohlelo ukusunduza izaziso, okubangela ukuzenzela, opharetha be-iGaming banqoba impi yeselula.
Ku-Element Wave sisebenza nabanye babaqhubi abakhulu bokubheja nokudlala imidlalo eYurophu. Silethe isigamu sezigidigidi zemilayezo yokumaketha yeselula futhi sahlaziya imicimbi eminingi yohlelo lokusebenza. Umhlahlandlela wethu weselula we-iGaming Insights utholakala mahhala kubakhangisi beselula ukuthi bafunde kuwo.
Umhlahlandlela Wokuqonda Kwamaselula we-iGaming
Umhlahlandlela ubheka ngokujulile ukusebenza kwangempela kwesikhathi sesidlali nomdlalo wangaphambi komdlalo kuzinhlelo zokusebenza. Indlela eqhutshwa yidatha yokwenza umuntu ngamunye ngokuya ngokuziphatha komdlali iletha umuzwa ophathekayo weselula.
Umbiko wethu ugxile emiphumeleni evela ezinkulungwaneni zemiyalezo yangaphakathi nohlelo, izaziso zohlelo lokusebenza nokuziphatha kwabadlali kuzo zonke izinhlelo zokusebenza ze-sportsbook nezekhasino.
Imininingwane ikhombisa ukuthambekela okucacile nemiphumela ebikezelayo ohambweni lokubhalisa. Kwesinye isikhathi inqubo yokubhalisa kumakhalekhukhwini iyaxaka noma iyinkimbinkimbi. Kungaba yinselelo ukuthi abadlali bayiqede. Umbiko wethu ubeka inani labadlali abaqedela ukubhaliswa bese bekhwabanisa, ngamathiphu okukuvimbela.
Umsebenzi womdlali namazinga wesimangalo sebhonasi anikeza uphawu olucacile lokuphumelela noma ukwehluleka kwemizamo yokumaketha yeselula. Ukwazi ukuthi abasebenzisi bakho bayayeka nini nokuthi inqubo isiza kanjani ukulungisa isu lakho ukuze lisebenze kangcono.
Isikhathi sangempela iyinhlamvu yesiliva ye-iGaming futhi siphakamisa ukuthi kumane nje kuyindaba yesikhathi, ngaphambi kokuba ibe yindinganiso yawo wonke ama-vertical. Izimbangela zesikhathi sangempela ezisuselwa kulokho okwenziwa umsebenzisi njengamanje, ukuthumela imiyalezo yesikhathi sangempela nokuhlaziywa kwesikhathi sangempela kuholela ekwandeni kokuzibandakanya nokugcinwa. Njengokuhlolisiswa komphakathi nokwesibili, kukhona ukuxhumana okukhona phakathi kokubheja nabaqhubi bemidlalo nezinhlelo zokusebenza ngenxa yesikhathi sangempela semidlalo. Kungashiwo okufanayo kuwo wonke ama-vertical.
Ukuvela kwama-smartphones kusho ukuthi opharetha be-iGaming babe nezinguquko eziningi abazenzayo. Lapho abadlali bake baya khona kubhuki, manje sebengabheja kusuka esihlalweni sobukhosi, endaweni yokucima ukoma bebukele umdlalo, ohambweni lwabo lokuya emsebenzini noma nasendlini yangasese! Ububanzi bemininingwane manje obutholakalayo buyathinta ingqondo: kusuka endaweni, ulimi nezinga ledivayisi, kuya kumlando wokubheja, ukusetshenziswa komcimbi wohlelo lokusebenza, nokuncamelayo kokugembula Leli zinga ledatha nokusetshenziswa kwale datha kunikeza ama-iGaming opharetha onqenqemeni lwamabhizinisi amaningi kwamanye ama-vertical.
Mayelana ne-Element Wave
I-Element Wave kwakha ukuzenzakalela kokukhangisa kwesikhathi sangempela kokubheja kwezemidlalo, ukwandisa ukuthengiselana okungaphakathi kokudlala okungafika ku-10X Isekelwe eGalway, i-Ireland Element Wave inikeza ubuchwepheshe besizukulwane esilandelayo nezinsizakalo eziphethwe ngochwepheshe ezimbonini zokubheja nezokudlala.
Tags: izinhlelo zokusebenza zekhasinoukuhambai-element waveamagagasiukugembulagameAbadlaliimidlalogamingindawoimiyalezoukugembula kwamaselulaImidlalo yeselulaimidlalo yokudlalaizinhlelo zokusebenza zemidlalo yeselulaukuqonda kwemidlalo yeselulaumhlahlandlela wokuqonda we-mobile igamingimiyalezo ephathekayoukugembula onlineisidlaliisikhathi sangempelaukugembula kwezemidlaloizinhlelo zokusebenza zokugembula kwezemidlalo
I-inMotionNow Iqalisa Ukuhamba Kokusebenza Kwama-Inthanethi Kwama-imeyili Okumaketha